I-GPS ubukhulu becandelo lokutshixo kunye nefowuni yonke indawo - i-Geofumed
NgoNovemba, 2011 GPS / Izixhobo, ezintsha
Kukho yemishini wena andazifumana evenkileni ifowuni njenge ifowuni exhasa 30 imizuzu ntluk kwamanzi, ityala elo recubres i iPhone for no day of jet Ukuskiya okanye GPS ezincinane ukukhumbula indlela elwandle.
Iifowuni isitoreji apho ufumanisa khona kwaye ezininzi iingcali kwi-telephony ebunzima kunye noovulindlela kule candelo, kunye nekhathalogu eninzi yeemveliso; ukubonisa imizekelo emibini enokufumaneka kwiphepha lakho:
Ndiyakuba luncedo ngeli xesha ndichitha ixesha elingangeeyure ndikhangela isithuthi kwindawo yokupaka apho kwakukho izithuthi ze-4,000 kwaye ndalibala ukubhala phantsi kwikhowudi yecandelo; Ndandifuna ukukhala ndize ndibe sisithakazelo ukuba ndibiwe. Ngenxa yezi zinto, okanye imeko yokukhumbula indlela ngaphandle kokusebenzisa isiphequluli esiqhelekileyo, ezi zixhobo zisebenza ngokumangalisayo. Kancinci kangangokuba isebenza njengokhiye wesitshixo, inokulondoloza amanqaku anele ukukhumbula indlela yokubuya ngokulandela utolo.
I-AquaBox I-Smartphone Case Case
Kule nto unako ukubeka umakhalekhukhwini, ngaphandle kokuthintela ekusebenziseni umnxeba. Ukulungele ukusetyenziswa kusebe lolwandle, echibini, kwimidlalo yamanzi okanye ngokuloba ngenxa yokuba isixhobo siya kuhamba ngokubonga kwi-handle yayo kwaye ungazifaka kwiimitha ze-6 ngaphandle kwengozi.
Iyahambelana nazo zonke ezi mzekelo:
I-Apple: i-iPhone (yonke), iTouch
HTC: Hero, Touch Pro2, Aria, 2 ukuthambekela, i-Droid engaqinisekanga, i-Touch My, i-Ozone
I-LG: Thinta amahemuhemu, iTanthom, Ally, OptimusS, M, Centio
Motorola Backflip (ivaliwe) R2D2 Droid, Droid 2, liyidle, CliqXT, ukungcikiva
I-Nokia: N8, Nuron 5230
I-Palm: Pixi, Plus, Pre
I-Samsung: Funa, i-Instinct i-HD, Cinga, i-Transofrm, i-Captivate, i-Moment, i-Caliber, iCraft, i-Gravity
Iifowuni zomhlaba wonke
yenzelwe Ngokuqhelekileyo amanzi okanye emanzi iimeko, ngoko ngokuqhelekileyo inkxaso ukuya kangangesiqingatha seyure kwamanzi, amaqondo obushushu kakhulu, elidadayo phezu kwamanzi kwaye nala istili rubber ukumelana amathontsi phezu kweemitha 1.50. Ukongeza, ukuba bazise igumbi ukuze SIM khadi ngaphezu kwesinye uze ukuvulwa ukusetyenziswa kunye nawuphi na umboneleli zeefoni; kaninzi baye banyamezela iiyure ezinde yentetho rhoqo ngaphandle kokulahlekelwa uphawu. Ezinye ziquka isalathisi laser, isibane, FM irediyo, wenkunkuma ukuba ibattery ngaphandle umbane kunye ezithile, ezifana kwimeko Bravus LM802B ixhasa ukuya 19 imihla kwimo yokulinda.
Kukho iimveliso ezinjengeBravus, Samsung, Sonim, ITTM, Topcom, ATEX, phakathi kwabanye, kunye nemifanekiso eyahlukeneyo kunye neenkcukacha kwimeko esithandayo. Ngoko ukuba uceba ukuthenga ifowuni yonkqantosi okanye ube ngumsasazisi, le ndawo iya kuqala.
Ndinicebisa usebenzisa uphendlo ophezulu, izimvo kunye izithembiso, iilinki emazantsi ephepha kodwa ulindele ekugqibeleni wababeka kumjikelo yokukhangela ifikeleleke ngakumbi ngenxa yokuba indawo umdla kakhulu.
Post edlulileyo«Edlulileyo Uhambo lwam lokugqibela kwiifoto ze-7
Post Next I-Geobide, Ulungelelaniso lweNkqubo yoTshintsho ED50 kunye ne-ETRS89Okulandelayo "